व्यावसायिक प्रेरणाको स्रोत बन्दै रेन्बो ट्राउट पालन
म्याग्दी (अस) । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ तातोपानीका दुई युवाले शुरू गरेको रेन्बो ट्राउट माछापालन यस क्षेत्रका अन्य युवाका लागि व्यावसायिक प्रेरणाको स्रोत बनेको छ । आपूmहरूले थालेको रेन्बो ट्राउट पालनले विदेश जान चाहने युवालाई समेत आप्mनै गाउँ–ठाउँमा स्वरोजगार बन्न पे्रेर...
सडक मर्मत नहुँदा हिउँदमा पनि चलेनन् गाडी
रूकुम । रूकुमपूर्वको बैंसपानी–धपे सडकखण्डअन्तर्गत बैंसपानी–पाटागाउँ सडक मर्मत नहुँदा हिउँदयाममा समेत गाडी चल्न सकेका छैनन् । वर्षायाममा माथिबाट खसेको पहिरो र भेलले भत्कीएको सडक मर्मतका लागि स्थानीयबीच विवाद हुँदा गाडी सुचारू हुन नसकेको हो । स्थानीयले सडक मर्मत गर्दा भत्किएको स्थानमा पर्ख...
दुनाटपरी उद्योगबाट स्वरोजगार
दाङ (अस) । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१८, रातामाटामा ७ वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा आएको ‘सहारा दुनाटपरी फर्म’ले गाउँका महिलालाई स्वरोजगार बनाएको छ । जिल्ला लघु उद्यमले २०६९ मा दुनाटपरी बनाउने मेशिन प्रदान गरेपछि स्थापित भएको उद्योगमा अहिले १७ जना महिलाले नियमित रोजगारी पाएका छन् ।...
हिउँदे झरीले इँटा उद्योगमा लाखौं क्षति
दाङ (अस) । दाङमा हिउँदे झरीले करीब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको इँटामा क्षति भएको छ । तीन दिनसम्म परेकोे झरीले जिल्लाका विभिन्न स्थानका इँटा उद्योगमा उक्त मूल्य बराबरको काँचो इँटामा क्षति पुगेको दाङ देउखुरी इँटा व्यवसायी संघले बताएको छ । झरीले काँचो इँटा गलेर नष्ट भएको इँटा उद्योगीहरूले बताएका...
प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन शुरू
रूपन्देही (अस) । प्रदेश ५ को हिउँदे अधिवेशन आइतवारदेखि शुरू भएको छ । ४ महीनापछि शुरू भएको अधिवेशनले प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । विधयेक अधिवेशनका रूपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनलाई यसपटक प्रदेशको राजधानी र नाम टुंगो लगाउनुपर्ने दबाब छ । अधिवेशनको पहिलो दिनको बैठकमा सांसदहर...
१५६ मेगावाटको माडी जलाशययुक्त आयोजना : सम्भाव्यता सर्वेक्षणको काम शुरू
रोल्पा । माडी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता सर्वेक्षण काम शुरू भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले रोल्पाको माडीचौरमा बिहीवार आयोजनाको सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन गरेसँगै सर्वेक्षण कार्य शुरू भएको हो । सो आयोजनाबाट १५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने छ । प्रदेश...
रूपन्देही । प्रदेश नं. ५ को हिउँदे अधिवेशन आइतवारदेखि शुरू हुुँदै छ । चार महीनापछि शुुरू हुुन लागेको अधिवेशनमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण टुुङ्गो लगाउनुुपर्ने दबाब छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि गठित विशेष समितिले आप्mनो प्रतिवेदन प्रदेशसभामा बुुझाइसकेको छ । प्रदेश नं. ३ ले राजधान...